को’रोनाबाट अमेरिकामा ६ जनाको ज्या’न गएपछि ट्रम्पले गरिदिए फेरि यस्तो ठुलो घोषणा, विश्व नै चकित ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /International/को’रोनाबाट अमेरिकामा ६ जनाको ज्या’न गएपछि ट्रम्पले गरिदिए फेरि यस्तो ठुलो घोषणा, विश्व नै चकित !
8,720 Less thanaminute
एजेन्सी । अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यमा को’रोनाभाइ’रसको सं’क्रमणबाट थप चार जनाको मृ’त्यु भएको छ। योसँगै अमेरिकाका को’रोनाभाइ’रसको सं’क्रमणबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ। साताको अन्त्यतीर वासिङ्टन राज्यले राज्यमा को’रना सं’क्रमण देखिएपछि आ’पतकालको घोषणा गरेको छ।
यसैगरी राज्यले आफ्नो क्षेत्रमा १८ वटा को’रोनाभाइ’रसको सं’क्रमणको मामिला पुष्टि भएको बताएको छ। को’रोनाभा’इरसको सं’क्रमणबाट ज्यान गुमाएका पहिलो दुई व्यक्तिको अध्ययन गरेका अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यहाँ केही साता अगाडिदेखि सो भाइरस फैलिएको आ’शंका गर्दै करिब १५ सय मानिहरुलाई सं’क्रमण भएको हुनसक्ने अनुमान लगाएका छन्।
त्यहाँ सार्वजनिक भएका १४ मध्ये ८ वटा मामिला किङ काउन्टीसँग सम्बन्धित रहेको छ। मृत्यु भएका चार मामिला यसै काउन्टीको एक अस्पतालसँग सम्बन्धित छन्। काउन्टीले सं’क्रमितहरूलाई ‘आइसोलेसन’मा राख्न होटल खरिद गर्ने भएको छ। सोमबारबाट सियाटलका थप विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्।
अमेरिकामा हालसम्म पाँच राज्यमा को’रोनाभा’इरसका सं’क्रमितहरू भेटिएका छन्। ती संक्रमितहरू वासिङटन, क्यालिफोर्निया, इलिनोइस, रोड आइल्याण्ड, न्यू योर्क, फ्लोरिडा र ओरेगन राज्यमा भेटिएका हुन्। देशभरमा करिब ९१ वटा मामिलाहरू पुष्टि भएका छन्।
ट्रम्पलाई पछि पार्दै १६ वर्षीय ग्रेटा थनवर्ग ‘टाइम वर्ष व्यक्ति’ बनेपछी बिस्व भरी खैलाबैला- ट्रम्प नै तिनछक
इरानमा १७६ जना यात्रु बोकेको विमान दुर्घटना, चालक दलका सदस्य सहित सबैको निधन ! आकाश बाट जमिनमा विमान बजारिदै गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक (भिडियोसहित)
नर्सलाई सबैभन्दा धेरै तलब दिने १० देशहरु, कति हुन्छ बार्षिक कमाई